Orinasa mpanamboatra pensily China | SJJ
Ampiharo amin'ny fanoratana na amin'ny fanaovana sary. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny pensilihazo mahafatifaty, pensilihazo unicorn, pensilihazo karbaona ary kitila pensilihazo isan-karazany dia milamina ara-tontolo iainana, azo antoka ho an'ny ankizy ary afaka mifanaraka amin'ny fenitra fitsapana isan-karazany.
Ny pensilihazo dia fitaovana entina manoratra na manao sary, mazàna amin'ny taratasy. Ny ankamaroan'ny tehina pensilihazo dia vita amin'ny vovoka grafita afangaro amin'ny fatorana tanimanga mora esorina. Ny valizy pensilihazo mahazatra indrindra dia hazo manify, mazàna boribory, hexagonal amin'ny faritra ampitana, fa indraindray kosa mandroritra na telozoro. Ny casing ivelany dia azo vita amin'ny fitaovana hafa, toy ny plastika, ny andian-tafika na ny taratasy. Mba hampiasa ny pensilihazo dia tokony hosokirina na hodidiana ny casing mba hampiharihary ny faran'ny fiasa ho toy ny teboka maranitra ahafahan'ny olona maneho ny heviny.
pensilihazo dia fitaovana tsotra nefa mahatalanjona mahazaka tanana izay mahafeno ny filan'ny biraonao ary mianatra noho ny tsipika maizimaizina. Pensilihazo HBno fenitra amin'ny fanoratana isan'andro. Azonao atao ihany koa ny manamboatra mari-pahaizana samihafa ho an'ny filàna isan-karazany ary manangana na manafatra ny pensilihazo tsara indrindra ao anaty loko mitambatra ao anatin'izany ny tsipika iray amin'ny soratra sy ny endritsoratra maro be. Ankoatry ny fampiasana azo ampiasaina amin'ny pensilihazo, azonao atao ny mametraka ny sary famantarana anao amin'ny fampiroboroboana na fanaovana doka ny marikao amin'ny vidiny ambany, azafady mba omeo toky fa ny grafita sisa tavela amin'ny hazo pensilihazo dia tsy misy poizina, ary tsy mampidi-doza ny grafita raha lanina, hitandrina na tsy hahatsiaro tena ny olona. ao an-tsainao rehefa mampiasa, ka mazava ho azy fa ity dia ho iray amin'ireo entana fampiroboroboana faran'izay tsara.
Vita amin'ny basswood, famenoana grafita. Ny tadin'ny borosy marefo dia tena mahazaka azy ary mora diovina.
Kilasy mitarika: Voatanisa avy amin'ny malemy indrindra ka hatramin'ny sarotra indrindra: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, ary 9H.
Famaranana satin-malama ho an'ny fihazonana azo antoka sy ahazoana aina
Safidy ara-materialy: pensilihazo grafit，Pensilihazo grafititra，Pensilihazo grafita misy ranoka，Pensilihazo saribao，Pensilihazo karbaona，Pensilihazo miloko，Pensilihazo menaka，Pensily vita amin'ny rano
Safidy endrika: Triangular, Hexagonal ， Round, azo onenana
Tena mety amin'ny fanomezana fampiroboroboana, fahatsiarovana, fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, sns. Tsara ho an'ny sekoly, trano ary birao.
Teo aloha: Silisy hafa